Indlu yaseFama eyimbali emantla ePittsburgh - I-Airbnb
Indlu yaseFama eyimbali emantla ePittsburgh
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguChristy
I-wifi ekhawulezayo ye-67 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Yonwabela indawo yabucala, yokubaleka ilizwe kule fama inomtsalane iqala ngeminyaka yoo-1830s kwi-100 yeehektare zaseNorth Ridge. Ibekwe ngokufanelekileyo kwimizuzu nje ukusuka kumbindi wedolophu yasePittsburgh (iikhilomitha ezingama-20 kwi-Rte. 28). Ilungele abantu, izibini, iintsapho kunye nabahambi beshishini.
Imbali yaseFama yaseNorth Ridge inezinto zakudala ezintle kulo lonke ikhaya. Konwabele ukusetyenziswa ngokupheleleyo kwekhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala ama-3 kumgangatho we-2 kunye nebhafu epheleleyo. Ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala ibonelela ngamalungiselelo okulala e-7. Yonwabela ukuhamba okude kule propati yeehektare eziyi-100 okanye uphumle kwindawo ebanzi ngaphambili nangasemva.
I-wifi ekhawulezayo – i-67 Mbps
33" HDTV ene-I-Roku, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Indawo yabucala kakhulu kwindawo ezolileyo kufutshane neNatrona Heights kunye neTarentum enezinto ezininzi eziluncedo (indawo zokutyela, iivenkile ezithengisa ukutya, njl.njl.). I-Pittsburgh Mills Mall ikwayimizuzu nje esemazantsi kwi-Rt 28 eneendawo zokutyela ezininzi, imiboniso bhanyabhanya kunye neevenkile ezininzi.
Fowuna okanye uthumele umyalezo kwaye ndiza kuphendula ngokukhawuleza kuzo naziphi na iimfuno onokuba nazo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Natrona Heights